Fantatry ny filoha anie ry federasionina handisport ny misy anareo e, aza ampijaliana i Faravavy
lundi, 06 septembre 2021 19:49
Faravavy Aurélie dia atleta niatrika ny lalao Paralimpika tany Japon amin'ny hazakazaka 100m sy 200m ho an'ny olona manana fahasembanana amin'ny fahitana.
Mbola tsy lasa i Faravavy dia nahely fa tsy manana billet andehanana izy, nefa ny filohan'ny féderasiona no tsy manome ny programan'i Faravavy. Niantohan'ny ministera ny tapakila mitentina 20 000 000ar.
Nolazaina indray fa tsy nisy fitaovana entina any Japon i Faravavy, nefa dia mibalika be ny sary nandraisan'ny filohan'ny federasionina ny fitaovana.
Nanainga i Faravavy sy ny delegasionina, tsy nisy mba filazana na tonga soa aman-tsara na tsia i Faravavy avy amin'ny federasionina, ny masoivoho tany an-toerana no nampilaza sy nanome vaovao.
Nolazaina indray fa tsy afaka miatrika ny hazakazaka 200m indray i Faravavy, raha nahavita nanamontsana ny hafangainam-pandehany teo aloha aza izy ny 100m, nefa ny marina tara tamin'ny fotoana ny delegasionina tamin'ny antso vaky lapely, ka dia tsy afaka nifaninana i Faravavy, na dia nanana ny fahafahana nanao izany tokoa aza.
Nody indray ny delegasionina nitondra andrafaravavy, fa tsy re tsaika, tsy nisy filazana avy amin'ny federasionina, fa nitsaitsaika ka ny olom-pantatra teny Ivato no nilaza fa efa nigadona io maraina io i Faravavy Aurélie.
Tsy hilaza zavatra maro aho, fa na i Faravavy aza vaky vava hoe aza omena an'ireo delegasionina ireo ny vola ho entina any Japon, fa aleo tafaverina vao alaina, misy aza fitarainany fa ampijaliana izy.
Tsy atao an'izany kosa ny Atletatsika, indrindra fa ireny misy kilema tsy maintsy miankina amin'ny hafa ireny.